August 11, 2011 – democracy for burma
On August 11, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ယမန်နေ့က ကျရောက်သော ၆၃ နှစ်မြောက် ကရင်နီအမျိုးသား ခုခံတော်လှန်ရေးနေ့ကို ကရင်နီတပ်မတော် ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်းရှိ ညာမူ တပ်စခန်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကေအဲန်ပီပီ ဒု-ဥက္ကဌ အေဘယ်တွိက သ၀ဏ်လွှာ ပေးပို့ခဲ့ရာတွင် တက်ရောက်လာသော ကရင်နီခေါင်းဆောင်များ၊ ကရင်နီတပ်မတော်များ၊ မိဘပြည်သူများနှင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများကို ယခုလို ပြောကြားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ကရင်နီတပ်မတော် စစ်ဦးစစ်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဘီထူးမှ မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် (ဓါတ်ပုံ-ကေတီ)
“ယနေ့ အချိန်အခါမှာ နိုင်ငံရေး အခြေအနေအရ စစ်မှန်တဲ့ ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးမှာ ကရင်နီအမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ ကရင်နီပြည်သူလူထုက ပါဝင်နေပေမယ့် ကရင်နီအမျိုးသားတို့ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်ကိုတော့ မေ့ထားလို့ မရဘူး” ဟု အေဘယ်တွိက ပြောကြားသည်။
ကေအဲန်ပီပီနှင့် ကရင်နီတပ်မတော်တို့သည် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးတွင် အခြားသော တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများတို့နှင့်အတူ လက်ခံပါဝင်လာရခြင်းမှာ နိုင်ငံရေး ရေစီးကြောင်းအရ ဖြစ်သည်ဟု ကရင်နီတပ်မတော် စစ်ဦးစစ်ချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဘီထူးက အခမ်းအနား ကျင်းပစဉ်တွင် ပြောကြားသွားသည်။
“ဒီကနေ့ လွတ်လပ်ခဲ့တဲ့ တိုင်းပြည်ကို ကျနော်တို့ ခဏ ချန်ထားပြီးမှ စစ်မှန်တဲ့ ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု တခု တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် တပ်ပေါင်းစု မျိုးစုံနဲ့ လုပ်ပြီးတော့မှ လုပ်လာခဲ့တယ်။ သို့သော်လည်းပဲ ဒီကနေ့ အခြေအနေအရ လက်ရှိ အခြေအနေအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ညီညွတ်တော့ တိုင်းရင်းသား ဖယ်ဒရယ် ကောင်စီ တခု ဆိုတာ ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ကျနော် တဦး အနေနဲ့ ကျနော် ယုံကြည်တာက ဒီအဖွဲ့အစည်းက လူမျိုးစုရဲ့ လိုလားတဲ့ တန်းတူရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် အဖွဲ့အစည်း တခု ဆိုတာ ကျနော် အနေနဲ့ အလေးအနက် ယုံကြည်တယ်” ဟု အခမ်းအနား မိန်းခွန်းတွင် ပြောကြားသွားသည်။
ယမန်နေ့က ကျင်းပခဲ့သော ကရင်နီအမျိုးသား ခုခံတော်လှန်ရေးနေ့တွင် ကရင်နီခေါင်းဆောင်များ၊ ကရင်နီတပ်မတော်မှ တပ်ဗိုလ်၊ တပ်မှူးများ၊ ရဲဘော်ရဲဘက်များ၊ မဟာမိတ်များ၊ မိဘပြည်သူများနှင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ၁၀၀၀ ကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ကရင်နီတပ်မတော်များမှ အခမ်းအနားအဖွင့် ချီတက်နေကြစဉ် (ဓါတ်ပုံ-ကေတီ) Continue reading “ကရင်နီအမျိုးသားတို့၏ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်ကို မမေ့ထားရန် ကေအဲန်ပီပီ မှာကြား” →
ဟိုး…တောင်ထိပ်ဖျားပေါ်က နေမင်းကြီး ငုပ်လျှိုးသွားသည်နှင့် အမှောင်ထု စတင်ဝင်ရောက်လေတော့သည်။ ညလေညှင်းလေးက အရိုးထိအောင် အေးနေတတ်ပါသည်။ တကယ်တော့ ကျနော်က ညာမို တပ်စခန်းသို့ ရောက်ရှိနေခြင်းပင်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မျဉ်းပေါ်ရှိ ညာမူတပ်စခန်းမှ ကရင်နီပြည်တွင်းသို့ မြင်တွေ့နေရသော ကရင်နီတပ်မတော် တပ်စခန်းများနှင့် ရှုခင်းများ (ဓါတ်ပုံ-ကေတီ)
ကျနော် ခြေလက် သန့်စင်ပြီး တဲထဲသို့ ၀င်ရောက်အနားယူလိုက်သည်။ အချိန်က ည ၈ နာရီခန့်၊ မိုးက သည်းလည်း မသည်း၊ ဖွဲလည်း မဖွဲ၊ အလယ်အလတ် နှုန်းဖြင့် အညိုးကြီးကြီး ရွာချနေလေသည်။ တဲက ထရံကာ၊ ၀ါးပျဉ်ခင်း၊ အမိုးကတော့ ဖက်ရွက်မို့ စောင်အောက်ကနေပြီးတော့ မိုးသီးဖက်ရွက်ကို တဖောက်ဖောက် ထိသံတွေ အတိုင်းသားကြားနေရလေသည်။
ညဥ့်လည်း သိပ်မနက်လှသေးသမို့ အိပ်လည်း မပျော်သေး၊ တောင်တွေးမြောက်တွေးဖြင့် မျက်စိကြောင်နေသေး၏။ တွေးရင်းတွေးရင်းဖြင့် အတွေးက ရဲဘော်တွေဆီ ဆွဲခေါ်သွားလေသည်။ သြော်…အခုလိုချိန်မှာ ငါတို့ လုံလုံခြုံခြုံ နေနိုင်သလောက် ရှေ့တန်းက ရဲဘော်တွေဆို ဘယ်လိုနေမှာဘာလိမ့်။
သူတို့ခမျာလည်း တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် အသက်ကို ပဓာန မထားပဲ ဒီလိုမိုးဖွဲနေတဲ့အချိန် တောထဲမှာ မြွေပါး၊ ကင်းပါးလည်း မသိ၊ ခြင်ကိုက်တယ် ဆိုတာမှန်းတောင် ဂရုမစိုက်အားဘဲ ဟိုခြုံဝင် ဒီခြုံတိုးနေရတဲ့ ဘ၀ပါလား။ သူတို့မှာလည်း ဟိုလူတွေနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့ အချိန်ဆိုရင် ပျားအုံ တအုံအလား ပခုံးဘေး၊ ပေါင်ဘေး၊ ပေါင်ကြား၊ လက်ကြားတွေများ ပြေးလွှားဆော့ကစားနေတဲ့ သေမင်းတမန် ကျည်ဆံတွေကို ကြောက်သွေး တစက်မှ မပါပဲ၊ ရဲရဲရင့်ရင့် ရန်သူတွေကို ချေမှုန်းနေရလေသည်။
ရဲဘော်တို့မှာက လူအင်အား များများစားစား မရှိပါ။ သူတို့ အင်အားက ပုရွက်ဆိတ်နှင့် ချီပြီး ရှိနေပါသည်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မျိုးချစ်စိတ်၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာ မပျောက်ပျက်စေချင်သည့် စိတ်များက ရဲဘော်တွေအတွက် အင်အားတရပ်လို ဖြစ်နေသည်။
မိမိအနှောင်အဖွဲ့များ ဖြစ်သည့် မိသားစု၊ သားသမီးတို့ကို ထားခဲ့ကြရသည်။ တာဝန်ကျရာ တတောဝင် တတောင်ထွက် ရန်သူတွေ့လျှင် ရှင်းလင်းပစ်ရန် ၀န်မလေးသည့် သူရဲကောင်းကြီးများ၊ တော်လှန်ရေး လုပ်သည်ဆိုသည်မှာ လွယ်သည့်ကိစ္စ မဟုတ်ပါ။ နှောင်လာနောက်သားတို့၏ အနာဂတ် သာယာလှပရေး အနွံတာခံ ကာကွယ်ပေးနေသည့် အချိန်လေးမှာ တို့ကျောင်းသားလူငယ်တတွေလည်း တဖက်တလမ်းကနေပြီး မကြိုးစားသင့်ပေဘူးလား။ Continue reading “လှေကားထစ်ပေါ်က တို့ရဲဘော်တေ-Ktimes” →
The court’s rejection of the appeal, Sithu Zeya, 23, who is in Insein Prison, will serve another seven to 15 years in prison
On August 11, 2011 August 11, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
New Delhi (Mizzima) – An appeal by Sithu Zeya, who took pictures following bomb explosions at the Rangoon water festival in 2010, asking the court to drop charges under the Electronics Act has been rejected, according to family members.
Sithu Zeya is serving an eight-year sentence under the Immigration Act and Unlawful Association Act.
Because of the court’s rejection of the appeal, Sithu Zeya, 23, who is in Insein Prison, will serve another seven to 15 years in prison, if the Mingalar Taungnyunt Township Court in Rangoon Region finds him guilty.
On August 3, Aye Thein, Sithu Zeya’s lawyer, filed the appeal. He said the judges rejected it immediately without even reading the case.
Sithu Zeya is charged under the Electronics Act, which has been widely used by the former military junta to punish pro-democracy opposition members who disseminate information by electronic communication that is deemed to threaten security or harm the government. On August 9, defence witnesses testified in Mingalar Taungnyunt Township court. Continue reading “The court’s rejection of the appeal, Sithu Zeya, 23, who is in Insein Prison, will serve another seven to 15 years in prison” →
ထိုင်းအစိုးရသစ်မှ မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် KNU မျှော်လင့်
သြဂုတ်လ ၁၁ရက်။ စောခါးစူး (ကေအိုင်စီ)
အသစ်တက်လာသည့် ထိုင်းအစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးတွင် တဖက်တလမ်းဖြင့် ကူညီပံ့ပိုးရန် မျှော်လင့်သည် ဟု ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU က ပြောကြားလိုက်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော အမျိုးသမီးဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာသူ ယင်လတ်ရှင်နာဝပ် (Yingluck Shinawatra) ဦးဆောင်သည့် အစိုး ရအဖွဲ့ သြဂုတ်လ ၉ရက်နေ့တွင် ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီး ၃၅ဦး အမည်စာရင်းကိုလည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို သို့ ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်တွင် KNU က ယခုလို ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
KNU ၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် နော်စီဖိုးရာစိန်က “အခုတက်လာတဲ့ အစိုးရသစ်က ဘာပေါ်လစီ ချမှတ် ချမှတ်။ အိမ်နီး ချင်းဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့ အစိုးရ၊ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံတွေကို ဆွေးနွေးပွဲ လမ်းပေါ်ရောက်အောင် တွန်းပို့ပေးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်တယ်။”ဟု ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း တက်လာသည့် ထိုင်းအစိုးရသစ်သည် နိုင်ငံရေးပေါ်လစီများ မချမှတ်ရသေးသည့်အတွက် တိုင်းရင်း သား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ဆက်ဆံရေး အပါအ၀င် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးအပေါ် မည်မျှ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိ မပြောနိုင်သေးကြောင်း သူမက ဖြည့်စွက်ပြောသည်။ Continue reading “ထိုင်းအစိုးရသစ်မှ မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် KNU မျှော်လင့်” →
Kachin Martyr Day-Thailand (Kachin)-video
Twelve women US senators accused Burma-Myanmar’s regime on Wednesday of using rape asa“weapon of War”
all about Burma-Myanmar’s regime using rape asa“weapon of War”
Summary of Rape documented during Burma Army offensive in northern Shan State…
KIO Than Aung-MPs’ letter blames Kachin troops Engl
WAR:Second visit made by4military planes around 01:00 yesterday,9August-Shan state army
Heavy clash between the Shan State Army and IB 287 at Pangzay-Loi Yoi, between Kehsi and Nampook at 12:00. “Our guys had them surrounded at the last report (16:00),” said Maj Sai La, SSA spokesman
Celebrating 8888 Mass Uprising Inside Burma-engl by BDC